​फागुन १७ मा ‘जात्रै जात्रा’ ! कति होला कमेडीको मात्रा ?
Mon, Jul 23, 2018 | 19:45:03 NST
14:38 PM (3months ago )
काठमाडौं, चैत २८ – प्रदीप भट्टराईको तेस्रो निर्देशनमा सिनेमा ‘जात्रै जात्रा’को घोषणा भएको छ ।
गएको वर्ष सफलतापूर्वक ५१ दिन मनाएको सिनेमा ‘जात्रा’को सिक्वेलको नाम ‘जात्रै जात्रा’ राखिएको हो । यो सिनेमालाई प्रदीपले निर्देशन गर्दैछन् भने रविन्द्र सिंह बानियाँले निर्माण गर्दैछन् ।
चैत्र २७ गते बुधबार सिनेमाको आधिकारिक घोषणा गर्दै सिनेमाको प्रदर्शन मिति पनि तय गरिएको छ । यो सिनेमा अर्को वर्षको फागुन १७ मा प्रदर्शन हुने भएको छ ।
कारोबारका हिसाबले सफल रहेको ‘जात्रा’ अत्यधिक दर्शकको रोजाईमा पर्ने ७३ सालको सफल सिनेमा हो । यो सिनेमाले प्रस्तुति र विषयवस्तुका हिसाबले विभिन्न अवार्डहरु पनि जितेको छ । निर्देशक भट्टराईले यसै सिनेमाबाट डेब्यू निर्देशकको रुपमा विभिन्न अवार्डहरु पनि जिते । यसका अलावा ‘जात्रा’ बाटै अभिनेता विपिन कार्की प्राय अवार्डमा उत्कृष्ट अभिनेता पनि बने ।
यतिबेला ‘जात्रै जात्रा’को कथामा काम भईरहेको छ । ‘जात्रा’का कलाकारहरु विपिन कार्की, वर्षा राउत, रविन्द्र सिंह बानिया, रविन्द्र झा सिनेमाका लागि फाइनल भएका छन् भने अन्य केही नयाँ कलाकारहरु पनि सिनेमामा देखिने भएका छन् जसको खोजी यतिबेला भइरहेको छ ।
यसका अलावा सिनेमामा राखिने गीतहरु छनौटको क्रममा रहेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । ‘जात्रा’मा जम्मा एउटा मात्र गीत थियो । यसको सिक्वेलमा भने दुईवटा गीत राख्ने तयारी भएको निर्देशक भट्टराईको भनाई छ ।
यो सिनेमा २०७५ सालको असार अन्तिमबाट फ्लोरमा जाने भएको छ । निर्देशक प्रदीप भट्टराईको यो तेस्रो निर्देशन हो । उनले डेब्यू सिनेमा ‘जात्रा’ पछि दोस्रो सिनेमाको रुपमा ‘शत्रु गते’ निर्देशन गरिसकेका छन् ।
उनको दोस्रो निर्देशन रहेको सिनेमा ‘शत्रु गते’ अहिले तेस्रो सातामा प्रदर्शन भइरहेको छ । कमेडी जनराका सिनेमा बनाइरहेका निर्देशक प्रदीपको तेस्रो सिनेमामा कमेडीको मात्रा कति छ त्यो भने सिनेमा प्रदर्शन भएपछि नै थाहा हुनेछ ।